Dheefta daryeel | Samfunnskunnskap.no
Sawiradani waxa ku tusayaan qaar ka mid dheefta daryeelka ee bulshada noorwiijanka.
Dheefta daryeelka ee Norwey waa mid guud.
Macnaheedu waa in dhammaan xaq loo wada leeyahay in si fiican looga faa’iidaysto iyada.
Inkasta oo xaq loo leeyahey in laga faa’iideysto dheefta daryeelka, hadana ujeeddadu ma aha in qof kastaa isticmaalo dhammaan dheefaha daryeelka.
Qaar ka mid kaalmooyinka daryeelka muddo dheer oo nolosheena ka mid ah ayaan inteena badan isticmaalaa. Qaar ka mid dheefta daryeelku waa waxbarashada, lacagta hawlgabka oo dhammaan laga maalgeliyo dheefta daryeelka. Tusaale ahaan dhammaan carruurta iyo dhalinyarada Norwey waxay xaq u leeyihiin oo waajib ku ah toban sanno oo iskuul hoose/dhexe ah, intooda badana way qaataan waxbarasho dugsi sare. Qaar badan oo inaga mid ahna waxay nasiib u leeyihiin inay gaadhaan waqtiga hawlgabka.
Qaar ka mid kaalmooyinka daryeelka waxa laga yaabaa inaan nolosheena hal mar ama dhawr jeer isticmaalo. Waa bilaash in Norwey isbitaal lagu jiifiyo oo lagugu daaweeyo, sidoo kale markaad dhakhtar la kulanto waxaad bixineysaa oo keliya qeybta yar ee kugu soo hagaaga.
Kaalmooyinka daryeelka ee kale waxa loogu talogaley in la isticmaalo waqtiyada noloshu inagu adkaato, tusaale sida marka shaqo la’aani dhacdo ama aad xanuunsato oo aanaad shaqo tegin. Caawimada dhaqaale ee xaaladahan oo kale lagu bixiyo waa ku meelgaadh ilaa inta xaaladu ka fududaaneyso.
Adeegyada kala duwan
Bulsho-daryeel ahaan waxay siisaa muwaadiniinta, waxa aynu ugu yeedhno dheef daryeel.
Qaar ka mid ah dheefta daryeelka waxaan isticmaalaa muddo dheer oo nolosheenna ah.
Qaar ka mid ah dheefta daryeelka waxaan isticmaalaa keliya marmar.
Qaar ka mid ah dheefta daryeelka laga yaabaa in aynaan isticmaalin weligeen.